musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China Kuputsa Nhau » Hotera yepamusoro yepasi rose inovhura muShanghai, China
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kuzvirumbidza muresitorendi pa 120th pasi uye makumi maviri nemana-maawa wega wekudyira, hotera yakasarudzika inogara pamusoro peiyo 24-meer (632 tsoka) Shanghai Tower.
Yepamusoro-soro hotera yepamusoro pasirese inovhura mune yechipiri-yakareba kwazvo chivakwa pasi rose muChina.
Vaenzi vanogona kunakidzwa neresitorendi maresitorendi manomwe, mabhawa, spa uye 84th-pasi pekushambira dziva.
Husiku mu "J Suite" inodhura kupfuura 67,000 yuan ($ 10,377 XNUMX).
I “yepamusoro soro” hotera yepamusoro pasirese yakavhura masuo ayo muchivako chechipiri pakureba kupfuura zvese pasi peDubai Burj Khalifa, muShanghai, China.
Kuzvirumbidza muresitorendi pa 120th pasi uye makumi maviri nemana maawa munhu wega mudiri webasa, hotera yepamusoro inogara pamusoro pe 24-meer (632 tsoka) Shanghai Shongwe mudunhu reguta rezvemari.
Elevators whiz vashanyi vane homwe dzakadzika uye musoro wezvikwiriso zvinokwidza zvinotyisa-kunge skyscraper pakumhanya-nzeve kumhanya kwemamita gumi nemasere pasekondi kuenda kuJ Hotel's 18 dzimba dzakanaka.
Kuvhurwa kwehotera kwakanonoka nedenda re COVID-19 asi parizvino rakatanga kugamuchira vashanyi vane zvitsitsinho vanogona kufonera masevhisi emunhu anozvipira chero nguva, masikati kana husiku.
Vashanyi vanogona zvakare kunakidzwa neimwe yehotera nomwe dzeresitorendi, mabara, spa, 84th-pasi padziva rekushambira, uye nezvimwe zvese zvakajairwa kuteedzera kwepamusoro-notch hotera.
Nomuzvarirwo, humbozha hwakadai hauuyi hwakachipa. Kupemberera kuvhurwa kwayo J Hotel iri kupa "yakasarudzika chiitiko chiyero" che3,088 450 yuan ($ 34) husiku, asi mitengo yemasuti ayo makumi matatu nemana inokwira kumusoro-soro.
Husiku mu "J Suite", izere nemakristani chandeliers uye sauna, uyu Mugovera inodhura anopfuura 67,000 yuan ($ 10,377).
Ihotera iri chikamu cheJin Jiang International Mahotera, iboka rakakura reChinese rehurumende, uye yakavhurwa zviri pamutemo neMugovera.